आधुनिक युगमा बिसेको छोरा « KhelkudNews.com
आधुनिक युगमा बिसेको छोरा
Published On : 17 February, 2014 10:18 am
काठमाडौं, ५ फागुन । नेपाल एकीकरण भन्दा अघिको युगमा गोर्खामा एउटा पात्र थियो, बिसे । नेपाल एकीकरणको अभियानमा ती नै बिसेको भुमिका अहंम थियो । राजा पृथ्बी नारायण शाहलाई आर्थिक संकट परेको समयमा त्यही बिसेको योजनाले एकीकरण अभियान सम्भब भएको थियो । अहिले हामी उभिएको भुगोल र यो बिसाल सिमाना पनि उनको देन हो । इतीहासका पण्डितहरु भन्ने गर्छन् ,‘ कहिल्यै नगुमेको हाम्रो सम्प्रभुतामा गर्व गर्नेका लागि त्यो कालखण्डको बिसे आदरणिय नाम हो । ’
फरक धारको चलचीत्रको सुटिङ गर्ने क्रमम त्यसै गोरखाको वारपाकमा पुगेको ‘नेचुरल मुभि मेकर्स ’को युनिटकले अर्को एउटा पात्रको परिकल्पना गर्‍यो ,
‘ बिसे ’ । इतीहासको त्यो बिसेले नेपाललाई भौगोलीक एकीकरण गराउन ठूलो सहयोग गर्‍यो । चलचीत्र ‘ र्वल्डकप इन नेपाल’को बिसेले भावनात्मक
एकीकरणमा बल पुर्‍याउने छ । झापामा जन्मेका र एन्फा एकडेमीमा बढेको फुटबल स्टर तथा चलचीत्रमा बिसेको छोराको भुमिकामा रहेका उमेस थापाकै विचारमा चलचीत्रले नेपाली समाजमा एकदमै महत्वपूर्ण सन्देश छाड्ने छ । ‘ हामी दलीत । साथीका बाबाले हाम्रो बाबाालाई हेला गर्ने । ’ झापामा जन्मेर हुर्केका र जातीय भेदभाब पनि हुन्छ र ? भन्ने ठानेका उमेसले त्यो दृष्य पछि सम्झे ‘ जुन झण्डाको सानका लागि हामी मैदानमा मरिहत्ते गरेर खेल्छौ । त्यही झण्डा सिलाउनेहरु माथि किन यत्ति धेरै भेदभाव ? ’ तीन बर्ष अघि सुटीङ भएको थियो ‘ र्वल्डकप इन नेपाल’को त्यो समयमा उनी सानै थिए । उनलाई समाजका विविध विषयमा थाहा थिएन । फील्म युनिट मार्फत एन्फा अधीकारी टक्कर थापाले उनीसंग कुरा अघि बढाए । सुरुमा परिक्षण भयो । उनी छानीए । चलचीत्र सकिए पछि ‘ एडीटङ’ कै समयमा उनले आफैले चलचीत्र हेरे
पछि सोचे, ‘साच्चै म अभियन गर्न योग्य रहेछु । ’
हरेक खेलका महासंघीय स्वरुपमा ‘ सोसीयल रेस्पोन्सबीलीटी’ हेर्ने एउटा शाखा हुन्छ । फीफामा पनि छ । खेलस्टारको सामाजीक विकासमा योगदान रहनै
पर्छ भन्ने पनि उनले अहिले बुझेका छन् । त्यसैले त अहिले भन्छन् जातीय भेदभावविरुद्धको आन्दोलनका अगुवाका लागि चलचीत्र सहयोगी हुने छ । ‘
भेदभाव बिहिन समाजको परिकल्पना गर्नेका लागि चलचीत्र आकर्षण हुन सक्छ । हामी सबै यो चलचीत्र सफल बनाउन लाग्ने छौ । ’
उनी बाल्यकाल देखि नै सातदोबाटो स्थित एन्फा एकडेमीमा हुर्कीए । रमाइलो जिन्दगी विताए । प्रशिक्षक बालगोपाल मर्हजन र सुनील श्रेष्ठले उनीहरुमा
निहित प्रतिभालाई उजगार गर्न त्यत्तिकै मिहेनत गरिरहेका थिए । वारपाकमा अभिनयकै सन्दर्भमा उनले बुझे ‘ हामीमा करोडको ध्यान केन्द्रित हुदो रहेछ
। ’ त्यसै चलचीत्र पछि प्राप्त आत्मबलको लगत्तै भएको पहिलो यु–१६ साफ च्याम्पियनसीपमा उनले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे । उनी सहितको सिंगो नेपाली
टोलीले सनसनीपूर्ण प्रदर्शन गरेको त्यो प्रतियोगितामा नेपालनै जितको हकदार थियो । ‘ सेमिफाइनलको अन्तिम केही सेकेन्ड रोक्न नसक्नु र
टाइब्रेकरमा हार्नुको कारण त्यो दिन हाम्रो पक्षमा थिएन भन्ने मात्र हो । हामीले साच्चै उत्कृष्ट फुटबल खेलेका थियौ । ’ त्यो प्रतियोगिताकै बारे उमेस भन्छन् ।
चलचीत्रमा नायीकाका भुमिकामा रहेकी सोनु केसीको अभिनयले उनको मन छायो रे। उनकै बाबा बनेका शिब मैनालीसंग पनि एक खालको भावनात्मक साइनो जोडीयो । तर, फील्म युनिट साच्चै राम्रो भएको उनले महशुश गरे । उनी अहिले धेरै कुरा सोच्ने भइसकेका छन् । ‘ हामी नेपाली लोडसेटिङको मारमा परेका छौ । यो लोडसेटिङको असर कहासम्म परेको छ भन्ने पनि देश चलाउनेले चलचीत्र हेरे पछि बुझ्ने छन् । ’ आम नेपाली झै उनको पनि राजिनितीक नेतृत्वसंग गुनासो रहनेनै भयो । नेपालमा फुटबलको क्रेज बुझेको नेचुरल मुभि मेकर्स प्रति आभार ब्यक्त गर्दै उनी भन्छन् ‘ फुटबलको लोकप्रीयताका लागि यो चलचीत्र हो । ’ फील्मको अन्त्यमा उनले गरेको गोलले बर्षौ देखि भेदभावमा रहेको विसेलाई सबैलाई अंकमाल गर्छन् र खुसीयालीले बोकेर डुलाउछन । त्यही दृष्य सम्झदै उनी
भन्छन् ‘ मेरो गोलले मेरो बाबा भेदभाब मुक्त हुनु भयो । त्यस पछि मैले बुझें हामी फुटबल स्टारकै कारण सबै खाले समाजीक विकृतीको अन्त्य हुने छ ।